Boqor Shiinays ahaa oo lala aasay askartii ‘difaaci lahayd’ nolosha kadib - BBC News Somali
Boqor Shiinays ahaa oo lala aasay askartii ‘difaaci lahayd’ nolosha kadib
Xigashada Sawirka, Image copyrightCHINA PHOTOS/GETTY IMAGES
Cilmibaarayaasha baara raadadka taariikhda ayaa dalka Shiinaha ka heley qabri aad u weyn oo lagu keydiyay illaa 8 kun oo sanam oo loo ekeysiiyay askar rasmi ah, kuwaas oo lala aasay mid ka mid ah boqoradii ka talin jiray Shiinaha 2000 sano ka hor Qin Shi Huang.
Boqorkan ayaa aaminsanaa in geerida kadib ay nololi jirto, wuxuuna u baahnaa in lala aaso askar difaacda.
Waxaa la sheegay in dadkii hore ee Shiinaha ay aaminsanaa jireen in marka qofka madaxda ah ama magaca leh uu dhinto, in lala duugo qofkii qaadimka u ahaa ama adeegaha u ahaa, balse markii arrintaas cabasho badan laga keenay ayaa waxaa dhashay fikradda ah in la sameeyo sanamyo loo ekeysiiyay askar.
Waxaa kale oo qabriga laga heley qoraalo tiro badan oo uu boqorkan u digey guddoomiyeyaal gobol oo uu ku amray in ay soo helaan dawo geerida looga badbaado.
Meeshan ayaa waxa heley qof beeralay ah oo ceel qodanayay, kadibna waxaa loogu yeeray dad qubaro ah oo illaa hoos u qoday, kadibna soo saaray wax u eg madxaf weyn oo lagu keydiyay taalooyiin badan.
Waxyaabaha layaabka leh ayaa waxaa ka mid ah in dherar ahaan taalooyinka ay la'egyihiin dadka, islamarkaasna mid kasta oo ka mid ah uu leeyahay muuqaal waji oo gaar ah, waxaana sidoo kale la garan karaa darajooyinka ay askarta kala leeyihiin.
Dad badan ayaa u daawasho tago meeshan oo hadda shaqo badan laga qabtay, cilmi baaris dheeraad ahna lagu wado.